Home / Interior design / Inona no atao hoe rindrina lehibe?
2021 / 08 / 02 FisokajianaInterior design 5663 0
Ny tabilao maodely dia manolotra antsipiriany misy endriny, ary ny fahasamihafana misoko mangina dia manova ny habakabaka amin'ny sary tsy nahy.
Ny fitaovana "malaza" malaza, ny tontolon'ny Great Wall, dia anisan'ireo maodely malaza amin'ny indostrian'ny haingo noho ny hatsarany miavaka. Ny fahatsoran'ny atmosfera, ny fifampitohizan'ny tsipika dia mahatonga ny habaka hisokatra kokoa, ary ny firafitra marefo dia mahatonga ny fitaovana hivoatra kokoa. Io fomba faran'izay kely faran'izay maivana io, nefa ankehitriny dia maro ny olona manenjika!
Noho izany, anio isika dia hiresaka momba ny tontolon'ny Great Wall avy amin'ireto teboka manaraka ireto.
Inona ny tontolon'ny Great Wall?
Inona avy ireo toetra mampiavaka ny tontonana Great Wall?
Ny fampiharana azo ampiharina amin'ny tontonana Great Wall
Ny fizotry ny fametrahana ny tontonana Great Wall
Ny marika sy ny vidin'ny tontonana Great Wall
Great Wall panel dia karazana tabilao maodely vita amin'ny plastika vita amin'ny hazo, izay an'ny hazo ekolojika. Izy io dia fitaovana vaovao maitso namboarina tamin'ny vovo-kazo sy ny PVC ary miampy ireo additives hafa nohatsaraina. Nantsoina hoe tontolon'ny Great Wall izy satria ny ampitan'ny hazo fijaliana dia toy ny rindrina lehibe.
a. Loko manankarena sy maro karazana
Misy safidy maro loko toy ny fotsy sedera, mahogany, sandalwood volamena, volondavenona metaly, teakka aziatika, loko jaky Thai, walnut, kennel mainty, bois de rose, mena mena, maple, sns., Hamaly ny filan'ny endriny samy hafa sy ambaratonga.
Na ampiasaina amin'ny trano fandraisam-bahiny, efitrano fampirantiana, ary tranobe ho an'ny daholobe, na ho an'ny haingon-trano an-trano, dia azo ampiasaina amin'ny rindrina, gorodona, valindrihana, atsy ambaravarana, haingon-trano sy haingon-trano.
c. Fiarovana ny maitso sy ny tontolo iainana, tsy misy formaldehyde
Tsy misy formaldehyde, ammonia, benzene ary akora hafa manimba izany. Mifanaraka amin'ny fenitra fiarovana ny tontolo iainana nasionaly sy fenitra eropeana, fandotoana tsy misy poizina ary tsy misy fofona. Tena vokatra fiarovana tontolo iainana maitso izy io.
d. Tsy tantera-drano sy hamandoana-porofo, anti-bobongolo ary anti-harafesina
Manana fampisehoana matanjaka sy fanoherana rano tsara izy io. Ankoatr'izay, manana toetra tsara fanoherana ny harafesina, fanoherana ny ahitra ary fanoherana ny hamandoana izy. Azo ampiasaina mandritra ny fotoana lava aza any amin'ny tontolo ivelany izay misy fiovan'ny toetrandro be loatra, ary tsy hihena ny zava-bita.
e.Tsy mora deformasiôna, anti-antitra
Manana tanjaka avo sy fanoherana mahery vaika izy io. Tsy mora simba sy marefo izy io, ary manana fananana manohitra ny fahanterana. Manana fiainam-panompoana mihoatra ny 30 taona izy.
f.Mora manapaka, mora manamboatra
Azo hokapaina, navaina, aharatra, hombo, hoso-doko ary hametahana azy. Tsotra ny fametrahana azy ary mora ny manamboatra azy.
g. fanoherana ny menaka, mora diovina
Koa satria tsy tantera-drano ny fitaovana dia mahatohitra ny menaka sy ny loto izy io. Tsotra ny fanadiovana sy fikojakojana azy, ary azo fafana amin'ny tasy.
h. vokany haingo tsara
Izy io dia manana endrika voajanahary, tsara tarehy, kanto ary tsara tarehy, miaraka amin'ny ala sy hazo voajanahary amin'ny hazo matevina. Izy io dia azo natao hanehoana ny tsy manam-paharoa vokatry ny hatsarana maoderina amin'ny maritrano sy ny estetika famolavolana fitaovana amin'ny endrika endrika samihafa.
Ny rindrina Great Wall dia mihatra amin'ny rindrina sy ny tampon'ny trano fonenana, trano fandraisam-bahiny, birao, toeram-pivarotana, trano fisakafoanana sns. Izy io koa dia azo ampiharina amin'ny endrika ivelany, ary ny ankamaroany dia tsipika mitsangana.
Ary ny iray amin'ireo be mpampiasa indrindra dia ny trano fonenana. Na amin'ny rindrina aoriana na amin'ny wainscoting, na amin'ny valindrihana, dia afaka mamorona endrika haitraitra maivana vita amin'ny jiro izy io.
Ampiharo amin'ny rindrina sisiny rindrina
Ny tontonana amin'ny rindrina dia toy ny haingon-trano amin'ny rindrina, ary misy vokany telo heny ny halavany, mba hisy vokany mavitrika ny habaka, mba hahatratrarana ny vokarin'ny habaka. Ity koa no toerana be mpampiasa indrindra.
a. Ampiasaina ho vatana lehibe amin'ny faritra midadasika
Ny tontonana Great Wall dia ampiasaina ho toy ny vatan'ny backdrop lehibe, miaraka amin'ny faritra midadasika misy tsipika mitsivalana mifanindry. Izy io dia misy fiantraikany eo amin'ny maso, miseho misokatra kokoa sy habakabaka ny habakabaka.
▼ Ampiharina amin'ny tontolon'ny fahitalavitra ao amin'ny efitrano fandraisam-bahiny
▼ Ho an'ny rindrina ivelan'ny efitrano fandraisam-bahiny
▼ efitrano fatoriana
▼ Nampiasaina tamin'ny faritra fisakafoana sy lakozia
b. Ampiasaina ho haingon-trano
Ny tontonana Great Wall dia ampiasaina ho toy ny ampahany haingon-trano hanatsarana ny dinamika sy ny herin'ny habaka amin'ny alàlan'ny fahatsapana ny gadona amin'ny faritra kely iray.
▼ Ampiasaina amin'ny ampahany amin'ny efitrano fidirana tsy miankina
▼ Fampiasana ampahany amin'ny efitrano fandraisam-bahiny
▼ Fampiasana ampahany amin'ny efitrano fandriana
▼ Fampiasana ampahany amin'ny faritra fisakafoana sy lakozia
▼ Fampiasana ampahany amin'ny trano fandroana
d. Nampiasaina ho fizarana habakabaka na tetezamita
Amin'ny habaka lehibe misy ny fampidirana multi-fungsi, ny fiasa sy ny fampiasana amin'ny ankapobeny dia voafaritra sy manavaka amin'ny alàlan'ny fahasamihafana eo amin'ny rindrina, loko, firafitra sns.
Ny voka-dratsin'ny tontolon'ny Great Wall dia kôkô sy boribory, izay afaka mamorona hazavana sy alokaloka virtoaly sy tena ny tampon'ny rindrina, ka ny tetezamita ny fizarana habakabaka dia malefaka sy voajanahary tsy misy fahatapahana.
▼ Efitra fandraisam-bahiny sy efitrano fidirana
▼ Faritra efitrano fianarana sy efitrano fianarana
▼ Efitra fandraisam-bahiny sy fisakafoana ary lakozia
▼ Faritra fandriana sy fitafiana
▼ Faritra fianarana sy efitrano fandriana sy birao
▼ Toerana fandriana sy fialan-tsasatra
Fampiharana amin'ny wainscoting amin'ny rindrina
Ny rindrina Great Wall satria ny wainscoting amin'ny rindrina dia manana endrika tsotra sy mamiratra. Izy io dia afaka mamokatra effets visuels tsara raha tsy misy haingon-trano be loatra ary mety amin'ny fomba maro.
▲ Ampiharina amin'ny efitrano fandriana, na amin'ny sarin-tsary na amin'ny takelaka tokana
▲ Natao ho an'ny efitrano fianarana
▲ Natao ho an'ny efitra fisakafoana
Apetraka amin'ny valindrihana amin'ny valin-drihana
Tsy dia fahita firy ny mampiasa irery ny tontonana Great Wall ho valin'ny valin-drihana noho ny endriny tokana ary tsy misy symmetrika afovoany.
Azo ampiarahina amin'ny rindrina Great Wall panels, lalantsara ary habaka fifamoivoizana tery hafa, famenoana haingon-trano eo an-toerana mba hampitombo ny fahalianan'ny habaka.
▲ Miaraka amin'ny Wall Wall Panel
▲ Ampiharina amin'ny lalantsara
▲ Famenoana haingo amin'ny ampahany
Ny toerana fahita indrindra amin'ny tontolon'ny Great Wall dia ny rindrina. Ny fizotry ny fametrahana ny rindrin'ny rindrina dia somary tsotra ihany, ary ny fizotran'ny fananganana dia: zahao ny rindrin'ny rindrina → mamita ny rindrin'ny rindrina → mametraka ny keel → mametraka ny tontonana Great Wall.
Zahao ny rindrina
Alohan'ny fananganana dia jereo ny fahadiovan'ny tontonana rindrina sy ny rindrin'ny rindrina, na malama sy fisaka izy io. Raha be ny tsy fitoviana eo amin'ny faritra na tasy maro dia mila manadio sy manadio ny rindrina alohan'ny fananganana ianao.
▲ Hamafiso na fisaka ny rindrina na tsia
Famaranana ny rindrina
Raha manana tsy fitoviana sy lesoka hafa ny velaran'ny rindrina dia mila apetaho aloha ny rindrin'ny rindrina. Andraso mandra-paha maina tanteraka ny rindrina alohan'ny handehanany amin'ny dingana manaraka, ary hamafa ny tasy rehetra miaraka amin'izay.
▲ Ny faritra tsy mitovy dia mila apetaka
Arakaraka ny sary famolavolana, asio tsipika iray ary manaova lavaka amin'ny toerana mifanentana amin'ny rindrina, ary avy eo mampiasa bolts fanitarana vy tsy manara-penitra mba hametrahana ny volo ho an'ny tontolon'ny Great Wall amin'ny rindrina.
▲ Keel manokana Wall Panel lehibe
▲ Tabilaon'ny fametrahana keel
Ampidiro ny Panel Wall Great
Amboary ny takelaka Great Wall eo amin'ny keel misy fantsika amin'ny rivotra, avy eo apetraho ao amin'ny alàlan'ny tontolon'ny Great Wall voalohany ny tontolon'ny Great Wall. Ampidiro tsirairay ny takelaka Great Wall toa ity.
Farany, ampiasao ny vokatra mifanentana amin'ny Great Wall Board hanidiana ny vava sy hanadiovana ny tasy amin'ny faran'ny tabilao.
▲ Amboary ny takelaka Great Wall ao amin'ny keel
▲ Tabilao fametrahana ny tontonana Great Wall
▲ Fananganana fanao amin'ny rindrin'ny Great Wall
▲ Ny tabilao manaraka dia apetraka ao anaty alohan'ny tabilao teo aloha
▲ Skema fizotry ny fametrahana
Ny marika sy ny vidin'ny Great Wall Panel
Amin'ny maha-tabilao fanaovana maodely azy, ny Great Wall Board dia mampiasa ny vokany mihintsana sy milamina mba hamoronana fahatsapana faran'izay tsara amin'ny toerana tsotra. Izy io dia mandray tombony betsaka amin'ny fotoana iray, ary azo ampiasaina amin'ny faritra lehibe sy kely. Amin'ny ankapobeny dia manodidina ny 40-150 yuan isaky ny toradroa ny vidiny. Raha mpanamboatra ianao dia afaka mahita mpamorona hazo eko-hazo sy eco-board akaiky anao. Miovaova arakaraka ny faritra sy ny sakany ny vidiny.
Ity ambany ity, na torolàlana hamintina ny atiny androany.
Previous :: Tsy maintsy fantatry ny mpamorona ireo fitaovana amin'ny rindrina 9, mendrika ny angonina! Next: Inona no atao hoe PU Stone?